ဒီလှည့်ကွက်နှင့်အတူ Apple TV + ၏အခမဲ့နှစ်မြှင့်တင်ရေး၏အားသာချက်ကိုရယူပါ အိုင်ဖုန်းသတင်း
Toni Cortés | | သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က Apple ကဒီနှစ်အခမဲ့တိုးမြှင့်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါတို့အားလုံးပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ် ဇူလိုင်လအထိ။ ဤကမ်းလှမ်းချက်သည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိပြီး၎င်းကိုသင်နှစ်သက်နေပါကသင်သည်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူလျှင်၎င်းကိုတိုးချဲ့။ မရပါ။ ဒါကငါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအထိယုံကြည်ခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်လှည့်ကွက်တစ်ခုကငါ့အားရှင်းပြသည် ဉာဏ်ပဂေး ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က "Machinist" Apple Store မှ အဲဒါကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးပါပြီ၊ အက်ပဲလ်တီဗီ + ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိပျော်မွေ့သည်။
Valentine's Day အတွက်ကျွန်တော့်ဇနီးကို iPad အသစ်တစ်ခုပေးခဲ့တယ်။ သူ့မှာဘက်ထရီပြproblemsနာရှိနေပြီ၊Apple ကုန်သွယ်ရေးတွင်»ထိုအခါငါကစတုတ္ထမျိုးဆက် iPad Air ကိုများအတွက်သက်တမ်းတိုးပါပြီ။
ငါကအဲဒါကိုဘာစီလိုနာ၊ La Maquinista ၏ Apple Store မှာသွားတွေ့တယ်။ ငါ့ကိုလာတက်တဲ့ဖော်ရွေတဲ့ Genius ကရှင်းပြတယ် အနည်းငယ်လှည့်ကွက် အခမဲ့ TV အက်ပလီကေးရှင်းတွင်အခမဲ့မြှင့်တင်ရေးအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်။
ငါ့ကို iPad ပို့ခြင်းအားဖြင့်သူဟာငါပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာသတိပေးခဲ့တယ် Apple TV + ၏အခမဲ့နှစ်။ အိုင်ပက်ဒ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးအတွက်ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းပစ္စည်းများကို“ မိသားစုတစ်ခုအနေနှင့်” ပေါင်းစပ်။ ဇူလိုင်လအထိအခမဲ့နှစ်ကိုတိုးမြှင့်ခံစားနေပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုအခွင့်ကောင်း ယူ၍ မရပါဟုပြောခဲ့သည်။
ပြီးတော့သူကကျွန်တော့်ကို Apple TV + ဘယ်မှာများများကြည့်လေ့ရှိသလဲ။ ပြီးတော့အဲဒါကမီးဖိုချောင်မှာရှိတဲ့ Apple TV ပေါ်မှာ၊ on ည့်ခန်းမှာရှိတဲ့ TV ပေါ်မှာပါလို့ငါပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိသဘာဝတရားအားလုံးနှင့်အတူသူက“ ကောင်းပြီ Apple ID အသစ်တစ်ခုဖန်တီးပါ iPad အသစ်နှင့်အတူ။ အခမဲ့ TV အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသက်သွင်းပါ၊ ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ၊ သင့်အမျိုးသမီးက၎င်းကိုပြန်လည် ပြင်ဆင်၍ မီးဖိုချောင်နှင့် living ည့်ခန်းတွင်ဖန်တီးထားသော Apple ID အသစ်ကိုအသုံးပြုပါ။
ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကျယ်လာပြီး Genius လေးကိုကြီးမားတဲ့အပြုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ ငါ့မှာအက်ပဲလ်တီဗွီ + မရှိသေးဘူး 14 က de febrero del 2022 မီးဖိုချောင်ရှိ Apple TV နှင့် room ည့်ခန်းရှိ Samsung TV အက်ပ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။
Apple ID တစ်ခုဖန်တီးခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်သည်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် အကယ်လို့သင်က iPad၊ iPhone၊ iPod touch, Apple TV သို့မဟုတ် Mac တို့ကိုထုတ်တော့မယ်ဆိုရင် Apple က Apple TV + ကိုတစ်နှစ်စာပေးသွင်းပါလိမ့်မယ်။ ပြနာက အကယ်၍ သင်ဟာဒီပစ္စည်းတစ်ခုထဲကတစ်ခုကို ၀ ယ်ပြီးသားဖြစ်ပြီ၊ ဝယ်ယူမှုအသစ်နှင့်အတူတစ်နှစ်ထပ်တိုး။ မရပါ.
ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာ Apple ID အသစ်ကိုတီထွင်ခြင်းအားဖြင့်အိုင်ပက်ဒ်အသစ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ခဲ့သည်။ ပြုပြင်ပြီးတာနဲ့ Apple TV + ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးတစ်နှစ်ကိုအခမဲ့ activate လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းပေါ်လာတယ်။ ငါအဲဒီလိုလုပ်ပြီးစောင့်နေခဲ့တယ် မေးလ်ဖြင့်အတည်ပြုခြင်း Apple မှ
ပြီးသွားပါပြီ iPad ကိုပြန်ထားပါတယ် ပြီးတော့သူမကိုအိုင်ပက်အဟောင်းမှဒေတာများလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်သူမပြင်ဆင်နိုင်အောင်ဇနီးကိုပေးခဲ့တယ်။ Apple TV အသစ်ကိုပြန်ယူပြီး Apple ID အသစ်နဲ့သက်ဝင်စေပြီး living ည့်ခန်းတီဗွီရဲ့လျှောက်လွှာကိုပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲ။
ယခုအချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည် "မိသားစုတစ်ခုအနေနှင့်" ရှိသည့်ပစ္စည်းများတွင်ဒီရာထူးသည်ယခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သော်လည်းမီးဖိုချောင်နှင့် living ည့်ခန်းတွင်လှည့်စားမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » လက်ရှိအက်ပဲလ်တီဗီ + ၏အခမဲ့နှစ်၏ယခုမြှင့်တင်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးကိုဤလှည့်ကွက်ဖြင့်ယူပါ
အကယ်၍ သင်သည်ထို ID အသစ်ကိုမိသားစုထဲသို့ထည့်ပါက၊ သင်အားလုံးအတွက်နှစ်သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်မဟုတ်လော။
ကောင်းပြီ၊ မကောင်းတဲ့လှည့်ကွက်တစ်ခု၊ Appleid အသစ်တစ်ခုဖန်တီးပြီးကွန်ပျူတာအသစ်တခုထဲကို configure -.-
IPadOS 14.5 beta သည် 'Scribble' အရေးအသားနည်းကိုစပိန်ဘာသာနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
Apple သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကားအတွက်အထူး LiDAR စကင်နာကိုရှာသည်